”Milan waxay u baahan tahay 3-4 laacib oo waawayn, waxaan u xiisay San Siro oo ku daawanayso 80 kun” – Marcel Desailly – Gool FM
”Milan waxay u baahan tahay 3-4 laacib oo waawayn, waxaan u xiisay San Siro oo ku daawanayso 80 kun” – Marcel Desailly
(Paris) 08 Nof 2017 – Halyeeygii AC Milan ee Marcel Desailly ayaa sheegay inay Milan weli u baahan tahay “inay keensato 3 ilaa 4 laacib oo waawayn” fasalka soo socda.
Raacihii hore ee kooxdii adkayd ee Rossoneri u dheelayay min 1994 ilaa 1998, ee caanka ku ahaa ’goolkii uu ka dhaliyay dhamaadkii 94 Champions League Final oo ay 4-0 ku dhufteen Barcelona.
“Dabcan, Weligay waan jeclaan doonaa Milan. Inaad ka dheesho San Siro, ama Stadio Giuseppe Meazza iyadoo ay ku daawanayaan 80,000 oo taageere, waa dareen aan la sharrixi karin!” ayuu 49-jirkani u sheegay Mediaset Premium.
“Hadda woxoogaa waan dhibanahay, waxaanse rajaynayaa inay maamulku yaqaannaan waxa ay samaynayaan, waxaan filayaa inay Milan u baahan tahay 3-4 laacib oo waawayn oo soo kordhiya khibrad iyo aasaaska ay u baahan tahay Milan-ta aan naqaanno.” ayuu raaciyay Marcel.
''Waan Google gareeyay Sampdoria, waan jeclahay inaan Juve gool ka dhaliyo'' - Icardi
Serie A oo markii ugu horreeysey la ciyaari doono fasaxa jiilaalka (Jadwalkii oo lasoo saaray)